Yiqiniso, ukulungiswa ithanga kuhhavini ithatha isikhathi eside kunaleso ukupheka iphalishi nge ithanga efanayo, kodwa njengoba kuvela isidlo esimnandi!
Ngokwesibonelo, ithanga ephekwe eziko nge breadcrumbs. Izithako: 500 g ithanga eluhlaza, polstakana ochotshoziwe imvuthu bezinkwa ezimhlophe, isigamu ingilazi yobisi noma ukhilimu, iqanda elilodwa, 2 wezipuni ibhotela. Ithanga Imi ku nezixhobo ezinkulu, ubilise kuze isigamu, ukucwenga ketshezi, epholile futhi sibe yimichilo. Njengoba yenziwe ithanga udinga wafaka izingqimba pan, ungqimba ngamunye uthele imvuthu kanye ibhotela tincetu encane shift. Beat amaqanda nge cream noma ubisi, uthele ingxube ithanga Bhaka kuhhavini.
Ithanga kuhhavini inyama. Ithanga Imi izingcezu Usayizi medium, usawoti, umqulu ufulawa amaqanda ethosiwe emafutheni zemifino nhlangothi zombili. inyama eluhlaza ngosawoti kanye futhi kahle gazinga ne anyanisi. Indlela amafutha ne amafutha zemifino wafaka ungqimba yakhe yokuqala ithanga ke ungqimba inyama anyanisi, futhi ungqimba phezulu ithanga futhi. Top nge yashizi ushizi Dutch bese uthumela it kuhhavini ukubhaka. 400 g ithanga zokusetshenziswa kufanele uthathe 350-400 amagremu of inyama (yenkomo kangcono), 50 g ufulawa kakolweni, 2 u-anyanisi 2 amaqanda aluhlaza, 50 g samafutha zemifino kanye okuqinile ushizi Dutch.
Ithanga kuhhavini, wabhaka izinhlanzi. Izithako for izitsha: 200-300 g ithanga eluhlaza, amaqanda aluhlaza 2, dill omisiwe 1 inkomishi yogurt, 1 onion, 30 g samafutha zemifino, lemali incike ubukhulu izinhlanzi umumo: izinhlanzi ukuba embondelene phansi isikhunta e isendlalelo esisodwa; ungakwazi ukuthatha noma yisiphi umucu izinhlanzi (i-hake efanelekayo, mackerel, i-halibut, Pollock ne-cod). Izingcezu izinhlanzi walala phezu ngezansi efomini, wabeka phezu ithanga, uthathe tincetu mncane. Ithanga ukubeka phezulu onion oqoshiwe dill. amaqanda Fish nge ithanga uthele ophehliwe ne-yogurt ifomu usawoti bafakwa kuhovini oshisayo imizuzu engu-40 ngaphambi Udla ukuba isidlo itafula uthele amafutha zemifino.
Sweet izinyo uzongithanda ithanga kuhhavini nge amabhilikosi omisiwe. Per amakhilogramu ehlutshiwe imbewu ithanga yemisipha kufanele uthathe 300 g amabhilikosi omisiwe, 3 wezipuni ushukela, 3 wezipuni breading imvuthu, 50 g we ibhotela wenkomo (imajarini ungayithola enye), isigamu ingilazi yobisi kanye 2 izinkomishi béchamel sauce. Ithanga kumele uthathe cubes. Amabhilikosi ngaphambilini ofakwe amanzi bese sibe yimichilo. Xhuma nge amabhilikosi omisiwe, ithanga, ibhotela, ushukela, usawoti kanye nobisi, ngomusa simmered. Ngesimo, owagcoba ibhotela, wafaka ingxube lelungiselelwe, uthele sauce, ufafaze breadcrumbs ubhake yokuthumela kuhhavini. Ukulungisa sauce béchamel kudinga nje gazinga kancane in a isipuni ibhotela 2 wezipuni kafulawa ke alulaze ngezinhlobo ezimbili izinkomishi ubisi hot, ushukela ukunambitha kanye thumba cishe imizuzu engu-nanhlanu on ukushisa low, ibangele njalo. Uma sauce selupholile, mix it ne isikhuphasha eyodwa amaqanda.
Ngenxa ukugcwaliswa ngoba amakhekhe, ophaya, kanye nezinye izithelo nemifino avame ukusetshenziswa futhi ithanga. Kuhhavini, isibonelo, ungakwazi ukubhaka isinkwa ezazigxishwe ithanga. Ukuze test ruletnogo: 1 kg kafulawa kakolweni, iqanda elilodwa, 200 ml amanzi, 100 g le-bhotela (imajarini ungayithola enye), 1.5 ithisipuni baking soda. Ukuze ukugcwaliswa kudingeka ikhilogremu ithanga nahlanza, inkomishi phansi walnuts kanye 5 wezipuni ushukela. Ukuze uqale nge ukugcwaliswa: Hlanganisa yashizi ithanga inyama phansi nati kanye noshukela. Wale mikhiqizo uxove inhlama, ukuhlukana ngesigamu futhi ukhiphe ucezu ngalunye thinly. Ukuze gcoba ngamafutha yemifino inhlama mncane ungqimba, ukusakaza kanye nenxenye ukugcwaliswa yayo, alisibekele umqulu esalandela lapho sisuka ungqimba, futhi ezinamafutha akahle, wafaka ukugxusha asele. Nciphisa roll (hhayi Friend), gcoba ebusweni iqanda yehlisele phezu ishidi camera ngu noma imaphi amanoni, futhi ngokushesha uthathe izingxenye. Kuphela wayesezibeka roll kuhovini oshisayo ubhake imizuzu 45-50. Roll imenze etafuleni kakade seyizolile.
Lemonema (inhlanzi): zokupheka kanye izakhiwo ewusizo
Indlela ukupheka ikhekhe eqotho futhi okumnandi nge saury namazambane?
Amnandi yenkomo isibindi: Ukudla kadokotela
Montessori - Montessori uhlelo ...: incazelo, izinto, imicabango yabantu abazali nothisha
Creed - amakha kwabesilisa nabesifazane: Izibuyekezo
Abazingela goose iyaduma ngaphezulu